Sea of clouds နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(1/3)
[Sea of clouds]နှင့်ပတ်သက်သောနေရာများစာရင်း
A "sea of clouds" is the beautiful natural phenomenon visible when you gaze down fromahigh elevation, such asamountain, on to clouds spreading before you like an ocean. It isarare and wonderful sight that can only be seen under certain weather conditions. Suchafantastic vista is worth seeing at least once in your life.
ကျောက်တောင်များအောက်တွင် ကျယ်ပြန့် စွာရှိနေသော ရေခဲသောအချိန်၏ရေခဲများကြောင့် ပုံစံပြောင်းက ပန်းကန်လုံးပုံစံဖြစ်နေသော မြေကြီး။ အကျယ် (ဖျာ ...
အလှအပများ၏ပန်းခြံသည် ချိချိဘုရှိ နှင့်မိနာနောမချိကြားတွင်ရှိသော တောင်ထိပ်တွင်ရှိသော ပန်းခြံဖြစ်ပါသည်။ ဆာကူရာသည်လှပသည်ဟု ထင်ရှားပြီး (ခန်း...
အငူကဲ့သို့ ထိုးထွက်နေသော မြေနေရာနှင့် လမ်းသည်ထူးခြားသောနေရာ။ အဆိုးချိုင်းဝှမ်းဒေသတွင် တိမ်ပင်လယ်ဖြစ်ပေါ်လာပါက တကယ့်ကို ကောင်းကင်တွင်ရောက်ေ...